I-Qingdao Yinuoxin New Material Co., Ltd.itholakala edolobheni elihle elisogwini laseQingdao, empumalanga yeJiaozhou Bay, eduze neQingyin Expressway. Eduze neQingdao Liuting Airport, i-Huangdao Container Terminal, i-Qingdao Port, i-Rizhao Bulk Cargo Terminal, ezokuthutha zilula futhi zibushelelezi. Inkampani yethu inelungelo lokungenisa nokuthekelisa, futhi ibhizinisi elikhiqiza uchungechunge lwezithasiselo zenjoloba futhi lithengise imikhiqizo yamakhemikhali esezingeni eliphakeme.
Sinabasebenzi abangochwepheshe, abasezingeni eliphakeme, abasezingeni eliphakeme lokuthengisa nabaphathi
Noma ngabe kuthengiswa ngaphambili noma ngemuva kokuthengisa, sizokunikeza insizakalo enhle kakhulu, sikuvumela ukuthi uqonde futhi usebenzise imikhiqizo yethu ngokushesha okukhulu.
Kusukela yasungulwa eminyakeni eyisishiyagalombili eyedlule, inkampani izibophezele ekuhlinzekeni imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi esezingeni eliphezulu kumakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.
Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle nedumela, okusenza sikwazi ukusetha amagatsha nabasabalalisi abaningi ezweni lethu.